Public Kura | » १ सय ३६ रुपैयाँमा सिङ्गै घर ! १ सय ३६ रुपैयाँमा सिङ्गै घर ! – Public Kura
रोचक प्रसँग विश्व अर्थतन्त्र
१ सय ३६ रुपैयाँमा सिङ्गै घर !
२४ चैत्र २०७८
कोरोना महामारीका कारण विश्वका विभिन्न देशमा मानिसहरुको पेशा व्यवसायमा ठूलो असर पर्‍यो ।
लाखौँ करोडौँ मानिसहरुले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपर्यो । संसारका कतिपय देशमा घरजग्गा व्यवसायमा ठूलो गिरावट आयो र भाउ निकै खस्कियो । तर कोरोना मथ्थर भएसँगै व्यवसाय पुनः मुर्झाएको छ ।